मोबाइल पानीमा पर्‍यो ? यसो गर्नुहोस् « Lokpath
काठमाडौं । मोबाइल फोन आज भोली जतिबेला पनि चलाइरहेका हुन्छौं र हामीसँगै साथमा हुन्छ । कहिलेकाँही फोन भिज्ने गर्दछ । फोनमा पानी पर्‍यो वा पानमिा फोन डुब्यो भने के गर्ने ?
तपाईको भिजे फोन अन छ भने अफ गरिदिनुहोस् । कतिपयले फोन भिजेपछि चलाउने गरछ् । त्यसो गर्न हुँदैन । फोनलाई चार्जमा पनि नहाल्नुहोस् । मोबाइल अफ गरिसकेपछि मोबाइलमा भएका कुनै पनि बटमहरुलाई नथिच्नुहोस् ।
तपाईले यसो गर्नाले फोनमा हसने शर्ट सर्किटको खतरा रहदैन । यदी तपाइको मोबाइलमा ब्याट्री, मेमोरी कार्ड र सिमकार्ड झिक्न मिल्छ भने झिक्नुहोस् । तर यदि फोतपाइको फोनमा नन् रिमुभल ब्याट्री छ भने शर्ट हुने खतरा रहिरहन्छ ।
भिजेको फोनलाई सुकाउनुहोस् । फोन सुकाउन सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको घाम हो । फोनलाई घाममा राख्नुहोस् । अथवा हावामा राख्नुहोस् । जस्तै फ्यानको नजिक राखेर पनि फोन सुकाउन सकिन्छ । तर यत्यसो गर्दा चिप्समा पानि रहिरहने सम्भावना भने रहन्छ ।
यती गरेपछि फोनलाई तातो गरेर राख्नुहोस् जसका कारण फोनमा भएका ेपानि सुक्न सकोस् । त्यसपछि फोन अन गर्नुहोस् । अन भएन भने चार्जमा हाल्नुहोस् ।
सबै प्रक्रिया गर्दा पनि फोन खुलेन भने नजिकैको मोबाइल पसलमा फोन लैजानुहोस् ।
प्रकाशित मिति: २०७८,भाद्र,१५,मंगलवार १५:००
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह